Ezigbo Ihe Mere Iji Were Guru Social Media | Martech Zone
Ezigbo Ihe Mere Iji Were Guru Social Media
Sọnde, Septemba 26, 2010 Monday, April 20, 2015 Douglas Karr
N’afọ iri gara aga, arụọla m ọrụ n’esepụghị aka wee wuo ndị na-eso ya n'ịntanetị, ikike na oge na-aga nke ọma azụmahịa. Ugbu a, m na-eche ndị chọrọ iku m ọrụ ka m nwere ike inyere ha aka ime otu ihe ahụ. N'oge ụfọdụ ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọrụ ebube na enwere m ike ịnapụta. Mgbe ụfọdụ ọ bụghị ya, m na-enyekwa ọrụ dị iche.
N'ime afọ ndị a, ahụla m na ndị ọzọ karịrị m n'ịntanetị ma mụta ọtụtụ ihe. M na-na karịrị ọtụtụ ndị ọzọ… nnọọ ole na ole nwere a bipụtara akwụkwọ ma ọ bụ azụmahịa nke onwe ha gbadoro gburugburu ha nka. O nyela m nghọta na ihe na-arụ ọrụ, ihe anaghị arụ ọrụ, ego itinye ego nwere ike ịwụnye ikike gị, yana ihe nwere ike imebi ya.
Agbanyeghị, ihe ọmụma ahụ niile abụghị ezigbo ihe kpatara ịchọrọ ị were m n'ọrụ. Na ozi bụ n'ebe… ọ bụ online site na m blog posts, m ịde blọgụ azụmahịa akwụkwọ, na ihe ngosi m. Ọ bụrụ na ị na-eso m, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ndị a na-akpọ elekọta mmadụ media gurus, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile wepụtara ozi ahụ n'efu. Chọpụta - ọtụtụ na-enye condensed ọzụzụ ohere iji nweta a okuku N'ezie (ọ bụ oké ihe mere na-ekiri ka anyị na-ekwu okwu)… ma ihe bụ na ị ka nwere ike inweta ya na-enweghị iku anyị.
Ihe ị nweghi ike inweta n'efu bụ ikike anyị. Ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nwere nnukwu ihe na - esote - ọ na - abụkarị niche mara mma. My niche bụ ahịa n'ịntanetị, ahịa inbound na ịgụnye ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na teknụzụ ndị ọzọ n'ịntanetị iji wuo azụmahịa. Mgbe m na-agwa ọtụtụ ụlọ ọrụ na isiokwu ndị ahụ - ụlọ ọrụ ndị ọzọ etinyewo ego na ọrụ m na-achọ ihe dị iche iche…
Ha na-achọ nke m nkwenye ya mere ha nwere ike iwu ikike ngwa ngwa… nakwa nweta ndị na-ege m ntị.
Fans, na-eso ụzọ, ndị na-agụ akwụkwọ na ndị debanyere aha bụ ihe bara uru ugbu a… ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga-aga n'ihu itolite na-eso. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-agwa m ka m kwuo maka na ha ahụla ma m nwee nkwupụta m - mana ọtụtụ ndị ọzọ na-arịọ m ka m kwuo maka na ha ma na m ga-akwalite azụmahịa ha ma ọ bụ ọgbakọ ha na ndị na-ege m ntị. Ọ bụrụ na m na-ekwu - Achọrọ m ka ọ bụrụ nnukwu ihe omume… rere na uzu niile na Internetntanetị. Na ịkwụwa aka ọtọ niile, enwechaghị ohere m ga - akwalite mmemme m na - esonye… Naanị anaghị m enwe obi ụtọ banyere ha iji wee kwalite ha… na ndị na - ege m ntị nwere ike ịgwa.
Nke ahụ kwuru, ana m eji ohere ikwu okwu m na nkwenye m egwu egwu. Anaghị m agbanye nkwanye ugwu na-ekwenyeghị na isi mmalite ya - ọbụlagodi ma a na-akwụ m ụgwọ ime ya. Mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ m na-ekwutụbeghị okwu ntanetị. Ọ bụghị na ekweghị m na ha ruru eru, ọ bụ na ọ ga-abụ ihe adịghị mkpa ịkpọtụrụ m ndị na-ege m ntị. Okwu mmeghe ga-ele anya site na ebe ma amanye.
O juru m anya na ọnụ ọgụgụ nke elekọta mmadụ media gurus nke ahụ na-enye ụgwọ akwụ ụgwọ, tweets na-akwụ ụgwọ yana akwụ ụgwọ nkwado na-enweghị ijide n'aka na ha na-enye ndị na-ege ha ntị uru. Ha tinyere foto cheesy na ha guzo n'akụkụ onye dị mkpa n'ụzọ ụfọdụ na-enye echiche na ha ga-adị mkpa… lee foto dị n'elu;).
M na-eme ọ bụla iji zere usoro ndị a… ọ ga-abụ mkparị nye ndị na-ege ntị m rụsiri ọrụ ike iji wuo ma mechaa tinye ha n'ihe egwu. Echere m na ọ bụ atụmatụ dị mkpirikpi iji nweta ego - ọ na-ewetu ndị na-ege ha ntị ala karịa oge. Ọtụtụ n'ime mee ego online gurus mee nke a. Ha kwesiri igwu wayo ma zuta nkwenye ha n’azu ka ha na mmadu mejuputara na intaneti ha. Ndị na-ege ha ntị na-abịa ma na-aga dị ka ọ na-achọpụta na a ghọgbuola ha.
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie a nnukwu online ọnụnọ na ohere na-ege ntị nke a social media guru, ihe kachasị mfe iji mee nke a bụ ịkpọ nnukwu ọrụ social media guru nke ahụ nwere ihe ndị na-esonụ ị chọrọ iji nweta ma wuo ikike yana. N'okpuru ntuziaka FTC, Aga m ekwupụta mgbe niile na ha bụ ndị ahịa ma ọ bụ na a na-akwụ m ụgwọ maka nkwado m. Maka na m kpachapụrụ anya ka m ghara imetọ ndị na-ege m ntị obere ihe chọrọ ịtụ m ego, ndị na-ege m ntị achọghị ịma na a kwụrụ m ụgwọ ya. Ha achọpụtawo na ọbụlagodi nkwado akwụ ụgwọ m ga-aba uru oge niile.
Iringgba onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nwere ike ịnye gị ozi dị mkpa na ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịzụ ahịa gị… mana ezigbo ihe kpatara ị ga-eji were ụgwọ bụ ịnweta ndị na-ege ha ntị na ikike site na nkwado. Na-enweghị ya, ị nwere nnukwu ụzọ ị ga-aga. Site na ya, ị nwere ike ịbido mmalite mgbasa ozi mmekọrịta gị na ikike ịntanetị.
Tags: douglas karrseth godinsocial media guru
You Nwee Ntọala na Webmasters?
Ikwu okwu n’asụsụ ndị na-ege gị ntị